आगो-लागू खेल: मान्यता र कार्यक्रम
आगो-आवेदन (वा उद्धार) खेल - शारीरिक गतिविधि को एक विशेष प्रकारको सेवा अक्षर। यसलाई प्रदर्शन अभ्यास परिसर, विधिहरू अध्ययन को लागि व्यवहार मा प्रयोग गरिन्छ कि हुन्छन् आगो बुझाने। प्रतियोगिताहरु व्यक्तिगत र समूह स्ट्यान्डिङ दुवै आयोजना गरिन्छ।
कार्यक्रम मूल कुराहरु
त्यहाँ जो आवश्यक आगो-लागू खेल समावेश उपाय एक सम्पूर्ण प्रणाली (यी प्रतियोगिताहरु को प्रकार प्रत्येक अलग वर्णन गरिनेछ) छ।
यो एक सीढी संग प्रशिक्षण टावर को चौथो तल्ला मा विन्डो मा एक वृद्धि मान्छ। यी प्रतियोगिताहरु एक निश्चित अनुक्रम आयोजना गरिन्छ। को खेलाडी सुरु लाइन, प्रशिक्षण टावर को आधार देखि आएको छ जो अगाडि खडा, स्थिति लिनुपर्छ, यसलाई चरण कडाई निषेधित छ। एक आरामदायक स्थिति मा आक्रमण सीढी हात लाग्न दिनुभयो। को सहभागी एक संकेत मा सुरु र अरूलाई परेशान बिना टावर को फर्श जुटाउने कुनै पनि हालतमा प्रयोग गर्ने अधिकार छ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतियोगिता को अवस्था सिढी को इन्जेक्शन प्रदर्शन विन्डो देहली मा खडा देखि निषेधित छन्। समाप्त, को सदस्य उहाँले भुइँमा क्षेत्र मा दुवै खुट्टा आउँछ र सम्पर्क उपकरण बंद गर्दा।
को अवरोध 100 मीटर विजयी
यी प्रतियोगिताहरु निम्न क्रममा आयोजित छन्:
सुरु लाइन अघि स्थिति मा खेलाडी, उनको छोएर छैन। यसरी सहभागी जो कुनै पनि स्थिति हुन सक्छ बैरल, समातेर।
एक मार्ग मा चलिरहेको बार, को उछाल हटाउन, एक नली लिन हटाउन गर्दा, प्रत्येक अन्य Hoses कस्नु। त्यसपछि यसलाई बन्द गर्ने branching गर्न, प्राप्त गर्न आस्तीन बाहिर एक लाइन संलग्न र यसलाई राख्नु आवश्यक छ। आफ्नो खुट्टा ढलान र रैक मा रोक्न नगरी सकेसम्म बार जानुहोस्। को आस्तीन इच्छामा सार्न अनुमति छन्। Splachivanie युग्मन को बैरल गर्न आफूलाई पूर्वसूचना र एक स्टप र आन्दोलन रूपमा प्रक्रियामा branching दिनुभयो। तपाईं रोक्न बनाइएको काठ dismount भने, खेलाडी पहिलो यो परीक्षण पास गर्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो स्थान को शाखा सार्न सक्नुहुन्न।
सबै तपाईं खत्म पछि युग्मन टाउको बन्द गर्न आवश्यक छ।
परिणाम भने, चरण पार्टी तत्काल पूरा अवधिमा तरिका जसमा न्यायाधीश युग्मन टाउको ट्रंक र आस्तीन rallying को विशुद्धता आकलन गर्न मौका हुनेथियो एक ट्यूबलर लाइन आयोजित छैन छैन गणना गरिनेछ।
यो सुरूवात संकेत ध्वनि हुनेछ पछि आस्तीन स्पर्श गर्न निषेध गरिएको छ।
टाउको, घाँटी, हतियार र खुट्टा, निश्चित फिनिशिङ बाहेक शरीरको कुनै पनि भाग संग काल्पनिक रेखा को सम्पर्क क्षणमा।
यस प्रकारको माथिको दुवै संयोजन, प्रतियोगिता प्रतिनिधित्व गर्दछ। परिणाम अठोट व्यक्तिगत च्याम्पियनशिप लागि दुवै प्रतियोगिताहरु मा सहभागीहरू सेट समय गणना गरेर ठाउँ लिन्छ, तर समग्र टोली उभिरहेका गणना छैन।
यो प्रतियोगिता चार चरणमा, 100 मिटर दूरी प्रत्येक मा आयोजित गरिएको छ। यसलाई मा, कुनै पनि सहभागी एक चरण चलान गर्न सक्नुहुन्छ। आगो ट्रंक रिले लागि प्रयोग गरिन्छ। पछिल्लो सहभागी भएको बैरल साथ सँगै रेखा हटाउन आवश्यक छ। यस काल्पनिक समाप्त को सम्पर्क क्षणमा टाउको, घाँटी, हतियार र खुट्टा बाहेक शरीर को एक भाग को नवीनतम सदस्य, टोलीमा समाप्त मिलाएका छौं।
यो प्रतियोगिता मा, सुरु, खेलाडीहरूलाई आगो-प्राविधिक उपकरण द्वारा staffed छ जो ढाल, गर्न दूरी हटाउन। त्यसपछि branching पाइप र पंपों जोडिएको छ र त्यसपछि एक फायरमैन (ढाल को केन्द्र तल 45 मिटर) को स्टप अघि स्थिति खडा गर्दा, एक हात मा दुई लाइनहरु प्रशस्त। साथ र चूषण नली मोटर पम्प र सेवन ग्रिड जडित हुनुपर्छ, यो पानी ट्यांक जोडतोडले अघि उत्तरार्द्ध को चूषण नली संलग्न हुनुपर्छ भनेर प्रदान। खत्म पछि सामान्य न्यायाधीशहरूले ग्रिडको जडान स्लिभ को विशुद्धता जाँच गर्नुहोस्। त्यसपछि पंप मा गरिएका छन्। कि पछि, उनको एक झोला रेखाहरू खुवाउन जलाशय देखि पानी। प्रतियोगिता ढाकिएको फायरमैन 10 लिटर दुवै लक्ष्य मात्रा को क्षमता भर्न व्यवस्थित भने।
आगो-लागू खेल: निर्वहन
16 वर्ष - खेल को मास्टर को शीर्षक खेल को मास्टर लागि 17 पूर्ण वर्ष पुग्नुभएको छ जो, उम्मेदवार सहभागीहरूलाई सम्मानित गरिएको छ। सामान्य स्तर - 14 वर्ष को कार्यान्वयन पछि। मास्टर को मानार्थ शीर्षक कसरी प्राप्त गर्ने? आगो-लागू खेल, अनुसार उमेर संग मा स्थापित छन् जो नियमहरु, शीर्षक प्राप्त लागि केही मापदण्ड प्रदान। उदाहरणका लागि, एमएस निम्न प्रावधान अनुसार, तीन वर्षको अवधिमा को कार्यान्वयन मा डबल स्तर मा दिइएको छ: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु मा सहभागिता, रूसी आपतकालीन आपतकालीन अवस्थाहरू च्याम्पियनशिप र प्रतियोगिताहरु को राष्ट्रिय मात्रा मा अवस्थाहरू मंत्रालय, एक, सबै-रूसी Inter-क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल घटनाहरू लागि एकीकृत योजना थपियो। आगो-लागू खेल को छुट्टी स्तर पूरा हुन ठानेको जो अन्तर्गत अवस्था एक नम्बर पनि समावेश छ। - छ स्थिति जो छैन तलको क्षेत्रीय च्याम्पियनशिप मो प्रतियोगिता, एमएस लागि उम्मेदवार: यी विशेष समावेश समावेश। त्यहाँ कार्यक्रम प्रत्येक प्रकार को लागि दस दर्ता सहभागी एक न्यूनतम हुनुपर्छ। पहिलो वर्गमा - प्रतियोगिता, जो को स्थिति रूसी संघ को च्याम्पियनशिप EMERCOM भन्दा कम छ। कार्यक्रम प्रत्येक प्रकार को लागि दस दर्ता सहभागी एक न्यूनतम: सर्तहरू MMR लागि स्थापित ती समान छन्। दोस्रो, तेस्रो जुनियर स्तर कुनै पनि स्थिति को आधिकारिक प्रतियोगिता मा उपलब्ध छ।
उद्भव र विकास
आगो-लागू खेल सोभियत संघ को दिन यसको अस्तित्व थाले। 1937 मा फिर्ता, यसको पहिलो प्रतियोगिता आयोजित। आफ्नो सहभागीहरू को NKVD मा मजदूर थिए। घटनाहरु, एथलेटिक्स, सुटिङ र gymnastic तत्व को मुख्य प्रकार साथै कार्यक्रम थपिएका थिए। आधिकारिक, आगो-लागू खेल 1964 मा मान्यता थियो - त्यसपछि यो खालको संघ स्थापित भएको थियो। निम्न वर्ष, Leningrad को शहर मा, पहिले नै पहिलो विश्व कप पारित गरेको छ। 2001 मा रूस मा खेलकुद महासंघ rescuers र Firemen (अन्तर्राष्ट्रिय क्लास) थियो। अप्रिल 2002 मा, मा छलफल दृश्य प्रतियोगिताको खेल Zelenogorsk मा आयोजित। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वर्ण लगाउँथे। यो प्रतियोगिताको मा, तपाईं एशियाली कप जीत। सेप्टेम्बर, 2002 मा, यो मास्को मा 1st विश्व उद्धार र आगो को च्याम्पियनशिप भएको थियो। कजान मा 2010 मा जूनियर बीच पहिलो विश्व च्याम्पियनशिप होस्ट। ताकि रूस आगो-लागू खेल विकास गरिएको छ। 2013 मा - महिला सक्रिय भाग प्रतियोगिता हालै मात्र लिएर गरिएको छ। त्यो समय सम्म यो एक मानिसको खेल थियो।
कार्यस्थल मा तापमान स्तर। सेनेटरी नियम र मान्यता पनि
को कर्मचारी को दायित्व सुरक्षित काम अवस्था सुनिश्चित गर्न। श्रम कोड, लेख 212
को RECHARGE अग्निशामक के हो? आधारभूत मान्यता पनि र प्रक्रिया को नियम
आगो र प्राविधिक विशेषज्ञता। आगो सुरक्षा मा व्यवस्था
Microclimate - यो के हो? उत्पादन microclimate। परिसर को microclimate लागि स्वच्छ आवश्यकताहरू
बगैंचामा वा बगैचा गर्न प्याज बोक्रा: मल र किरा नियन्त्रण रूपमा प्रयोग
अभिनेता Nazarov Gennady: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। शीर्ष चलचित्र
Azithromycin: प्रयोगका लागि निर्देशनहरू।
दूध। को उपचार को लागि आवेदन
वेल्डिङ: वेल्डिङ विधिहरू र प्रविधि। वेल्डिंग विधिहरु को वर्गीकरण
साइटको निर्माण: कसरी आफ्नै हातले देश मा एक फोहरा बनाउन
पीठो को 300 ग्राम - यो धेरै चश्मा कसरी, वा उत्पादनहरु वजन
घरेलू अभ्यासहरू मा छोराछोरीको laryngitis कस्तो व्यवहार गर्ने? फारामहरू र रोग को संकेत
कसरी पत्ता लगाउन एक सेल फोन नम्बर मालिक जो